गृहमन्त्रीले सदनमा भने -निर्मलाका हत्यामा दाेषीलाइ कारवाही गरी छाड्छु | mulkhabar.com
गृहमन्त्रीले सदनमा भने -निर्मलाका हत्यामा दाेषीलाइ कारवाही गरी छाड्छु
September 14, 2018 | 12:53 pm 148 Hits
काठमाडौं, २९ भदाै –
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
विगत छ महिनामा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सरकार सापेक्षीक रूपमा सफल भएको दाबी उनकाे छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले तस्करी, सिण्डिकेट र अपराधकाे नियन्त्रणमा सरकारकाे प्रयास जारि रहेकाे बताए ।
उनले निर्मला पन्तको हत्यामा दाेषीलाई पत्ता लगाएर कारवाही नगर्दासम्म अाफ्नाे चित्त नबुझ्ने बताएर विपक्षीकाे चित्त बुझाउन सफल भएका थिए । कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले सरकारको ६ महिना लाजमर्दो कालखण्ड भएन र भन्ने प्रश्न गरेका थिए जसकाे गृहमन्त्री बादलले त्यसको खण्डन गरे ।
शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका हिसाबले ६ महिने कार्यकाल राम्रो भएको गृहमन्त्रीको दाबी छ । ‘सरकारको निश्कर्ष छ महिनाको कालखण्डमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण छ महिनामा सबैभन्दा राम्रो भएको छ ।’ गुण्डागर्दी निस्तेज, तस्करका सञ्जाल ध्वस्त पार्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने काम भएको बताए ।
गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका विषयमा पनि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै भने यसमा तपाईंहरू जस्तै म पनि चिन्तित छु ।
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सोधेको प्रश्नमा गृहमन्त्रीले थापाले भने, ‘घटनास्थल, जहाँ उहाँले छानविन गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे । त्यसक्रममा एक जना शक्तिशाली देखिने ठूलै जिउडालको मान्छे आयो रे । उसले तपाईले राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ । तर, यस्ता छानविन धेरै भए । छानविन गर्नेहरुलाई गाडी लगाएर हत्या हुने गरेको सम्झनुहोला भनेर भनेर । सायद शक्तिशाली व्यक्ति त्यही हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि थाहा छैन नाम ।’
यसैबीच, गृहमन्त्री बादलले प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका बाँकेका रामनमोहर यादव सीके राउतका कार्यकर्ता भएको बताएका छन् । यादवको हत्या भएको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरुले शुक्रबार संसद अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बादलले यादव सीके राउत समूहका कार्यकर्ता भएको र राष्ट्रिय हित प्रतिकुल गतिविधि गरेकाले पक्राउ गरेर राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए ।
यादवको मृत्यु प्रहरी यातनाका कारण नभई रोगका कारण भएको पाइएको बताए ।
काठमाडौं , ५ चैत – नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकललाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ । दुई देशबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटकलमा…
काठमाडौं, ३ चैत । भुमिसुधार मन्त्री पद्यमा अर्यालले कलंकीमा रहेको मालपोत कार्यालयको अनुगमन गरेकी छिन् । देशभरीका मालपोत र नापी…
२०७६ सालमा जम्मा १५ दिन सार्वजनिक विदा(सूचीसहित)
सहमति उलंघन गरे सिके राउतले, के गर्ला सरकारले ?
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयमा सरकारकाे तयारी के छ ?
मन्त्री अधिकारीलाई राष्ट्रिय सम्मान, अाज सार्वजनिक विदा – सरकार